नेकपामा दुई कित्ता : ओली सिध्याउने षडयन्त्रमा प्रचण्ड, कसको पक्षमा कति ? | सु-सुचित नेपालको चित्र
नेकपामा दुई कित्ता : ओली सिध्याउने षडयन्त्रमा प्रचण्ड, कसको पक्षमा कति ?
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा)का केपी शर्मा ओलीलाई सिद्ध्याउन प्रचण्डको आन्तरिक चलखेलले अन्तिम रुप पाएको छ । आन्तरिक श्रोतले दिएको जाकारी अनुसार अहिले प्रचण्डले नेकपा ठुला नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्न लागिपरेका छन् ।
उता तत्कालिन एमाले निकटका नेताहरुलाई समेत प्रचण्डले तानेपछि अध्यक्ष ओली एक्लीने सम्भावना बढि देखिन्छ । नेकपाकाो स्थााई समितीमा तत्कालिन एमाले निकट नेताहरु बढि भएपनि अहिले भने प्रचण्ड बहुमत सुरु भएको । पार्टिभित्र गुट उपगुट हुन थालेपछि अहिले पार्टि आफैमा कमजोर बन्दै गएको छ ।
नेकपामा अहिले प्रचण्ड पक्षमा ४५ जना नेताहरु रहेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा २७ जना नेता मात्र रहेका छन् । भित्री राजनीतिक रुपमा प्रभाव पार्न सक्ने मानिएका ३६ नेता मध्य २७ जना प्रचण्डको गुटमा रहेका छन् । पार्टिमा एकिकरण नहुदै देखिएको मोर्चाबन्दिले एकता प्रक्रिया अझ लम्बिने देखिन्छ ।
पढ्नुहोस् कसको पक्षमा को ? नामाकरण सहित